टिक-टकमा नाचेर भाई रल बुटवलकी सोनी घर छोडेर काठमाडौं आईन् । म्युजिक भिडियो खेलिन, फिल्म खेल्ने स,पना-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित कुराकानी) - Public 24Khabar
Home Entertainment टिक-टकमा नाचेर भाई रल बुटवलकी सोनी घर छोडेर काठमाडौं आईन् । म्युजिक...
बुटवलकी सोनिया महत यतिबेला टिकटकमा निकै भाईरल छिन् ।
१५ बर्षकी सोनियाको टिकटक आईडी भने आर्य एम सोनी हो । उनले नाचेर हालेका सबै भिडियोहरु लाखौंले हेरेका छन् । टिकटक खोलेको मात्र १ महिना भन्दा बडि भयो, यतिबेला उनलाई ५ लाख माथिले फलो गरेका छन् ।
सोनियालाई नेपालीले मात्र हैन बिदेशीले पनि माया गर्छन् । बिदेशबाट पनि आफुलाई धेरै कमेन्ट आउने गरेको उनी बताउँछिन् । पाकिस्तानी, बँगलादेशी उनका प्रशँसकहरु उनको नृत्यमा लोभिन्छन् ।
यसैबिच सोनिया काठमाडौं आएकी छिन् । उनलाई बिभिन्न म्युजिक भिडियोहरुबाट अफर आईसकेपछि उनी काठमाडौंमा छिन् । हालसम्म उनले २ वटा म्युजिक भिडियोमा आफ्नो अभिनय देखाइृसकिन् । टिकटक र म्युजिक भिडियोमा निकै फरक उनको अनुभव रह्यो ।
केहि भिडियोहरुकै कारण भाइृरल भएकी उनी शिशिर भण्डारीलाई भेट्दा खुशी भईन् । टिकटकका बिकृतिको बारेमा पनि सोनिया बोलिन् । उनले टिकटकमा आफ्नो नाम सोनी राख्नुको कारण भने यस्तो रहेछ ।
बुटवलकी सोनिया महत यतिबेला टिकटकमा निकै भाईरल छिन् । १५ बर्षकी सोनियाको टिकटक आईडी भने आर्य एम सोनी हो । उनले नाचेर हालेका सबै भिडियोहरु लाखौंले हेरेका छन् । टिकटक खोलेको मात्र १ महिना भन्दा बडि भयो, यतिबेला उनलाई ५ लाख माथिले फलो गरेका छन् ।
यसैबिच सोनिया काठमाडौं आएकी छिन् । उनलाई बिभिन्न म्युजिक भिडियोहरुबाट अफर आईसकेपछि उनी
ठमाडौंमा छिन् । हालसम्म उनले २ वटा म्युजिक भिडियोमा आफ्नो अभिनय देखाइृसकिन् । टिकटक र म्युजिक भिडियोमा निकै फरक उनको अनुभव रह्यो । केहि भिडियोहरुकै कारण भाइृरल भएकी उनी शिशिर भण्डारीलाई भेट्दा खुशी भईन् ।
टिकटकका बिकृतिको बारेमा पनि सोनिया बोलिन् । उनले टिकटकमा आफ्नो नाम सोनी राख्नुको कारण भने यस्तो रहेछ ।
Previous articleफेरी क’डाइका साथ काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा थपिने (सहि कि गलत ? )
Next articleभारतीय सुरक्षाकर्मीलाई यसरी किन छिर्न दिइदैँछ काठमाडौंमा ? के हो खास कुरा ?